अन्तमा, यो तपाईको जीवनमा गणना गरिएको वर्षहरू होइन। यो तपाईंको बर्षको जीवन हो। - अब्राहम लिंकन - उद्धरण प्याडिया
हामी हाम्रो उमेरलाई वर्षहरुमा गणना गर्छौं, होइन र? के तपाईंले कहिले सोच्नुभयो यदि वास्तवमै यो नै तपाईं लामो समय सम्म बाँच्न गणना गर्ने तरिका हो? दिनको अन्त्यमा, यो तपाईंको जीवनमा वर्षहरू कहिल्यै गणना हुँदैन। यो तपाईको बर्षको जीवनको बारेमा हो।
जब हामी हाम्रो जन्मदिन मनाउँछौं, हामी सामान्यतया हाम्रो उमेरको वर्षमा मैनबत्ती बत्ती बाल्छौं, तर हामी यो बिर्सदैनौं कि यो उमेर वा तपाईं बस्ने वर्षहरूको बारेमा होईन।
तपाईंको जीवन बाँच्नु उमेरको बारेमा कहिल्यै हुँदैन, तर यो त्यो जीवनको सार्थक बनाउन तपाईंले के गर्नुभयो भन्ने बारेमा सधैं हुन्छ? यो जीवनका वर्षहरू होइनन् जुन तपाईंलाई जे भए पनि दु: ख दिन चाहन्छन्!
त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले यती धेरै वर्षसम्म बाँचेका छन् कुनै पनि भावनाको योग्य बनाउन असफल भयो। अर्कोतर्फ, त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जो एक धेरै कलिलो उमेरमा मरे, तर हामी अझै पनि उनीहरूलाई केहि चीजको लागि सम्झन्छौं जुन उनीहरू अरूको लागि गर्थे।
तसर्थ, एक मानिस उसको बाँच्ने वर्षको संख्याले सम्झदैन, तर उसको कामहरूद्वारा।
बरु लामो जीवन बिताउनुको सट्टा जहाँ तपाईंले कुनै पनि समझदार कुरा गर्नुभएन, यो महत्त्वपूर्ण छ तपाईको जीवनमा अर्थपूर्ण केहि गर्न।
यदि तपाईं यो निश्चित गर्न चाहनुहुन्छ कि मानिसहरू तपाईं गएको बेलामा पनि तपाईंलाई सम्झन्छन् भने, केहि प्रयास गर्नुहोस् जसले उनीहरूलाई तपाईंमा गर्व महसुस गराउँछ।
तपाईंको वर्षहरूमा जीवन समावेश गर्नुहोस्यसको सट्टामा, तपाई जीवित हुनुहुन्छ वर्ष गणना मात्र!
प्रसिद्ध मान्छे द्वारा प्रसिद्ध उद्धरण
जीवन छोटो उद्धरण छ
Life Quotes छोटा
जीवन भनाइ र उद्धरण
तपाईं केवल एक पटक उद्धरणहरू लाइभ
म बिस्तारै हिंड्छु, तर म कहिले पछाडि हिंड्दिन। - अब्राहम लिंकन
यो भनिएको छ, "ढिलो र स्थिर रेस रेस।" हो, यो बिल्कुल साँचो हो। तपाइँले चलाउन आवश्यक छैन ...
मलाई एउटा रूख काट्न छ घण्टा दिनुहोस् र म पहिलो चारवटा बञ्चरो तीर्थें। - अब्राहम लिंकन
तपाईंको तयारीको स्तरले तपाईंको सफलतालाई निर्धारित गर्दछ। हो, यो सत्य हो! हार्डवर्क तपाईंलाई फिर्ता भुक्तान गर्न निश्चित छ। तपाईं ...
तपाईंको भविष्यको भविष्यवाणी गर्ने उत्तम तरिका यसलाई सिर्जना गर्नु हो। - अब्राहम लिंकन
यो सही नै भनिएको छ कि उत्तम तरिका जुन तपाईं आफैले भविष्यको भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो हो…
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो खुट्टा सही ठाउँमा राख्नु भएको छ, त्यसपछि दृढ खडा हुनुहोस्। - अब्राहम लिंकन
जीवनले हामीलाई विभिन्न परिस्थितिमा फ्याँक्छ। तिनीहरू मध्ये केही परीक्षण गर्दैछ र हामीलाई प्राय: गाह्रो लाग्छ ...
कसैको जीवनको उत्तम भागमा उहाँकै मित्रता हुन्छ। - अब्राहम लिंकन
विद्यालयमा, म सँधै ब्याकब्यान्चर हुँ र जब आज, म पछाडि फर्कन्छु, मलाई कहिले पनि सम्झने छैन।